हिमानीलाई सांसद बनाउन देउवा र ओली सकारात्मक, प्रचण्ड के भन्छन् ? – नेपाली सूर्य
January 29, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on हिमानीलाई सांसद बनाउन देउवा र ओली सकारात्मक, प्रचण्ड के भन्छन् ?
काठमाडौँ । पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहलाई राष्ट्रियसभामा प्रवेशको लागि दौडधुप सुरु भएको छ । राजनीतिमा आउने इच्छा देखाएसँगै हिमानीलाई राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाउन दरवार निकट व्यक्तिहरुले लविङ सुरु गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बैंककमा भेटेर हिमानीले आफू राजनीतिमा आउने इच्छा जाहेर गरेको बताइन्छ । पूर्व दरवारियाहरुले पनि हिमानीलाई संसदमा प्रवेश गराएर यही व्यवस्थामा दरवारको प्रतिनिधित्व गराउन दलहरुलाई सुझाव दिइरहेका छन् ।
उनीहरुले राजतन्त्र फर्कन गारो बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै यही व्यवस्थामा सहभागी भएर आफ्ना एजेण्डलाई जनतासम्म लिनु पर्ने सुझाव पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि दिइरहेका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ जनामा हिमानीको नाम पनि समावेश गर्न पूर्व दरवारीयहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माके अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार देउवा र ओली सकारात्मक भएपनि प्रचण्डले भने अझैं मुख खोलेका छैनन् । उनले हिमानीलाई सांसद बनाउँदा जनतामा राम्रो प्रभाव नपर्ने बताउँदै आएका छन् । kamananews
जोडी मिलाउने र निःसन्तानलाई सन्तान दिने दुप्चेश्वर महादेव
January 1, 2018 Nepali Surya